”Sucuudiga waxaa ka taliya dilayaal tuugo ah, MBS waa bilyanneer diktatoor ah!” – Musharrax Maraykan ah oo si cad Sucuudiga u maagay! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Sucuudiga waxaa ka taliya dilayaal tuugo ah, MBS waa bilyanneer diktatoor ah!”...
”Sucuudiga waxaa ka taliya dilayaal tuugo ah, MBS waa bilyanneer diktatoor ah!” – Musharrax Maraykan ah oo si cad Sucuudiga u maagay!
(Vermont) 19 Feb 2020 – Senatar Bernie Sanders, oo ah ninka haatan ugu cad cad musharrixiinta Dimoqraadiga, ayaa weerar cad ku qaaday hoggaanka Sucuudiga, mar uu ka hadlayey kulan uu soo duwayey CNN, isagoo ballan qaaday inuu cayrsan doono siyaasad cadaali ah dhanka Bariga Dhexe.
“Sanado badan, waxaan jeclayn Sucuudiga – xaliifkeenna cajiibka ah; dhibka qurihi wuxuu yahay inay dalkaa xukumaan dilayaal tuugo ah,” ayuu yiri Sanders oo aan waxba qar qarin.
Senatarka gobolka yar ee Vermont ayaa sidoo kale sheegay in “intii loo jilicsanaan lahaa” dhaxal-sugaha Mohammed bin Salman – oo uu ku tilmaamay “bilyaneer kali talis ah” – ay Washington isku daydo xallinta khilaafka Sucuudiga iy Iiraan si nabad loogu soo dabbaalo Bariga Dhexe.
Bernie oo hoggaaminaya codadka dadwaynaha labadii isreebreeb doorasho ee ay ilaa haatan Dimoqraadigu qabteen, ayaa sidoo kale soo jeediyay in iyada oo la taageerayo amaanka Israel aan misna la iska indha tirin baahida reer Falastiin.
Wuxuu ballan qaaday in uu taageeri doono madax bannaanida iyo amaanka muwaadiniinta Israeli isagoo aan taageerin “dowladda cunsuriga ah ee haatan ka jirta Israel”, sida uu yiri.
Previous articleMW Farmaajo & Biixi oo la sheegay inay gaareen ”heshiis qarsoodi ah” oo dadwaynaha laga qarinayo
Next articleRASMI: ”Dookh kale ma jiro!” – Turkiga uu ku dhawaaqay inuu diyaariyey weerar uu ku qaadayo Ciidamada Suuriya kaddib markii…!